MOMBA ANAY - Vola madinika sy Pins Co., Ltd.
Challenge Vola madinika
Fametrahana tamin'ny 2004, isika no nanokan-tena mba hanome isan-karazany ny fanomezam-pahasoavana ho amin'ny mpanjifa. maha-matihanina lapel tsimatra, vola madinika vy, keychains, fehin-kibo buckles, cufflinks orinasa ho an'ny mihoatra ny 15 taona, ny asa nanirahana antsika dia ny hanomezana vokatra sarobidy indrindra ho an'ny mpanjifa, tsy ny vidiny fa koa kalitao.
Mandinika tsara toy ny laharam-pahamehana voalohany, dia i vokatra rehetra tsikelikely ao anatin'ny fanaraha-maso ny kalitao hentitra.
Mpanjifa rehetra 'baiko dia tsy toetra antoka fa tena soa aman-tsara.
Ny sampan-draharahan'ny fanaraha-maso ny kalitao no hery, izy ireo hanara-maso nahavita dingana rehetra ao amin'ny dingana rehetra mba hahazoana antoka ny toetra ary koa ny habetsahany.
Miaraka amin'ny fitiavana ny zavatra ataontsika, ny mpiasa dia vonona ny hanome ny tsara indrindra ho anao mpanjifa! Varotra koa isika ny olona hiasa amin'ny andro na alina mba hahazoana antoka mpanjifa amin'ny toerana hafa mety mahazo valiny haingana no ilaina raha toa fakan-teny.
Contact us izao mba hanomboka!
No.1222 Nijiabang Zhoushi Road Town, Kunshan City, Sina